Midowga Musharraxiinta oo soo jeediyay in madaxweyne Farmaajo loo diido in uu ka qeyb-galo doorashada – Kalfadhi
Midowga Musharraxiinta oo soo jeediyay in madaxweyne Farmaajo loo diido in uu ka qeyb-galo doorashada
February 20, 2021 Hassan Istiila
Midowga Musharraxiinta oo maanta soo saaray war-saxaafadeed ayaa dhammaan qalalaasihii ka dhacay magaalada Muqdishu ku eedeeyay madaxweyne Farmaajo, waxaana ay fool xumo ku tilmaameen in madaxweynaha uu isticmaalo ciidan si ay u maquuniyaan shacabka.
Midowga ayaa sheegay in madaxweyne Farmaajo ay u arkaan in uu yahay dambiile qaran, isla markaana uusan sinaba qeyb uga noqon karin xal u helidda siyaasadda kala guurka ah, loona diido in uu ka qeyb qaato doorashada uu qabo dastuurka KMG ee dalka.
“Golaha Midowga Musharaxiinta waxay horay u aaminsanaayeen haddana u cadaatay in Madaxweyne hore Farmaajo uusan nabad iyo xasillooni u rabin dalka, daacadna ka aheyn inuu galo doorasho loo siman yahay” ayaa lagu yiri War saxaafadeedka.
Ra’iisul Wasaaraha Xukuumadda Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Xuseen Rooble ayaa nasiib darro ku tilmaamay in xilligaan la yiraahdo dalka dowladi kama jirto, weerarna lagu qaado saldhigiyada ciidanka qaranka ee difaaca dalka.
Mudane Rooble, ayaa hadalkaasi sheegay kaddib markii shalay iyo habeen hore magaalada ay ka dhaceen iska hor imaadyo hubeysan oo u dhaxeeyay ciidanka dowladda iyo kuwo daacad ku ah musharraxiinta xilka madaxweynenimada.
Jubbaland oo ugu baaqday mas’uuliyiinta dalka inay ilaaliyaan xuquuqda dastuuriga ee muwaadiniinta Soomaaliyeed
“Suura-gal ma ahan in shir doorasho lala galo ninkii weeray hotel labo Madaxweyne hore ay degganyihiin”